Tababarrada 109 Murashaxiinta Darawalka Tareenka Dumar ayaa laga bilaabay Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulTababarrada 109 Murashaxiinta Tababbarka ayaa laga bilaabay Istaanbuul
20 / 02 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, HAY'ADAHA, Headline, Gobolka Marmara, Metro, Metro Istanbul, TURKEY, VIDEOS
Waxaa ka bilaabmay tababarada murashaxiinta tababarayaasha haweenka ah magaalada Istanbul
METRO İSTANBUL, oo ​​ah shirkad hoos timaadda 'İBB', ayaa biloowday tababar 109 musharrax haween ah oo tartamayaasha ah. Maareeyaha guud Özgür Soy, oo la kulmay musharixiinta ayaa sheegay inay hadafkoodu yahay sidii loo kordhin lahaa shaqooyinka haweenka wuxuuna yiri, “nolosha dadka ayaa adiga lagugu aaminay. Taasi waa sababta heerarka waxbarashadeena ay aad u sarreeyaan. ”
operator ugu weyn dalka Turkiga ayaa ka mid ah nidaamka gaadiidka tareenada magaalooyinka Istanbul degmada Metropolitan (IMM), kabista ah ee METRO INC Istanbuul, isagoo intaa ku daray in qoyska oo ka mid ah darawaliinta tareenka cusub. Iyagoo doonaya in la kordhiyo shaqooyinka haweenka, 109 darawal oo dumar ah ayaa daraasadooda bilaabay.
"Waxaan rabnaa in haweenku ay si ka badan sidii hore u sameyaan meel ku habboon nolol-maalmeedka"
Murashaxiinta ayaa la kulmay METRO İSTANBUL A Manager Maareeyaha Guud Özgür Soy quraac ka hor inta aysan bilaabin tababarada. Isagoo caddeeyay in tababarka wadista gawaarida uu yahay mid ka mid ah aagagga muhiimka ah ee IMM, Özgür Soy wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay shaqada haweenka. "Waxaan rabnaa in haweenku ay si aad ah uga qeybgalaan nolosha ganacsiga, gaar ahaan IMM," ayay tiri Soy.
"NOLOL DADKA DADKA WAA KU SAMEEYAA ..."
Zgür Soy wuxuu ogaadey in wadista tareenka uu yahay mas'uuliyad muhiim ah, ,zgür Soy wuxuu kula taliyay musharrixiinta: “Nolosha dadka ayaa adiga adiga lagugu aaminay. Waxaad qaadi doontaa kumanaan kun oo qof tareenka aad adeegsato maalin walba. Taasi waa sababta heerarkeenna waxbarasho ay aad u sarreeyaan. Sababtaas awgeed, waa inaan dhammaantiin idiinka digaa oo aan uga digayaa tan, geeddi-socod waxbarasho oo aad u adag ayaa adiga ku sugaya. Waa inaad si adag u shaqeysaa oo aad xoogga u saartaa hannaanka tababarka oo aad u wanaagsan. Hadaad halkan timaadid, hadaad naftaada siiso oo aad shaqadan rabto, oo aan indhahaaga ku arko iftiinka, rabitaankaas; majirto sabab aad ku guuleysan weydo. Guul ayaan kuu rajeynayaa
4 BILAHA FASALKA IYO WAXBARASHADA FARSAMADA
Siinta gaadiid dagdag ah oo raaxo leh in ka badan 2 milyan oo deggan Istanbul maalin kasta, METRO İSTANBUL AŞ tareenka tareenka wuxuu ka gudbaa tababbarka degdegga ah. Musharixiinta laga soo xulay codsiyada laga sameeyay Kariyer.ibb.istanbul ayaa ka qeybgalaya Barnaamijka Tababarka Wadayaasha Tareenka oo soconaya 4 bilood. Dhamaadka tababarkan adag, oo ah halka lagu bixiyo casharo farsamo iyo aragti ahaan, musharixiinta guuleysata waxay shaqadooda bilaabi doonaan iyagoo sita magacyadooda.
Maareeyayaasha Tareenka ee DTD iyo Musharaxiinta Fulinta sii wadaan Tababar
Tareenada mustaqbalka ah Ku sii tababar tababaraha yurub
Mashruuca ATCAN Candidate Candidate ee mashruuca baabuurta cable Efes-Meryemana
Mardin Castle oo ka socda mashruuca calaamadda telefishinka SP
Mashruuca Alumi - Kocadağ Cable Carabta oo ka soo jeeda Musharax Madaxweyne Madaxweyne
Taageero buuxda oo ku socota Özer Ayik, musharaxa madaxweynaha ee Xiriirka Ski
Turkey Ski Madaxweynaha Federation Musharaxa Moosh
Mawduuca madaxweyne ee magaalada Istanbul ee magaalada caasimadda Gursel Tekin: Shan sano gudahood, waxan bartaa dhammaan degmooyinka shabakadda metro
Mashruuca Tramway Efes-Selcuk ee Musharaxa Musharaxnimada ee Musharaxa
Barnaamijka Tababbarka Wadayaasha